– Certificate HR Management
– Experience (4) over yrs
– သန်လျှင်ရှိ Korea Company တစ်ခုတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
– သာကေတမြို့နယ်၊သုဝဏ္ဏ မြို့နယ်တွင် Ferry ရှိသည်။
– လျှောက်ထားလိုသူများသည် [email protected] ကို mail ပို့ပြီးလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
– အသေးစိတ်သိလိုပါက 09-253725891 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. 309 total views, 1 today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ